म रित्तो बोट्टल
ढिलो भयपनी उनी एक दिन आउंछन
म रित्तो बोट्टल रक्सि बिनाको संग्लिएछु मेह्फीलमा
थामे होला कती हातहरुले रक्सि हाल्दा मेहफीलमा
म हेरिरहेछु पहिलो चोटि पिउनेलाई यो भट्टिमा
उस्को प्यासी आँखा तर चोटको निशानी छ हेराइमा
समात्दै छ कमाउदै हात मुटु जलेको निभाउन
मायालु डोली उठदा आफुलाई जिउदो लाश बनाउन
म हेरिरहेछु बिर्को खोल्दा गिलासमा पोखीइ नजरमा
चिट चिट पसिना पसिना हारको रेखा निधारमा
- अशोक "खलानको मान्छे"
दुरान फर्कायर हो गयको । एघार बर्ष भय । काआत बनाएर आउछु भनेका छन । लोग्ने बिनाकी बुहारी कसै संग हांसे पनि बोले पनि घरमा रिस गर्छन् । दाजुले फोन नगरे पैसा नपठाय पनि नन्द मै माथि जाइ लाग्छिन । छोराले हप्ता दिन फोन नगरे सासु पनि संका काट्छिन । आफ्न पोई लाई प्वाओ कमाउने अर्ती दियकी होली नि ? ---बिबाह हुंदा म २२ बर्षकी थियं अहिलेत म7कम २ बिसकी पुगें । बल्ल बल्ल भन सुन गरेर माइत हिंडेकी -आज भाईको छोरा भतिजाको बर्तवन्ध होरे । भरे तुरुंन्तै फर्कनु छ -देवोर को छोरा लाई बोडिंङ बाट ल्याउनु पर्छ चारै बजे आ इपुग्नु पर्छ । अस्ती फोन गरेका थिय । मुसिर सम्ममा अ।ई पुग्छु भनेका छन कुन्नी त्यसो भन्न लायको ३ बर्ष भयो ।खै मलाई त पत्यार पनि लाग्नै छोड्यो । आफु लाई राम्रो लागेको साडी लागायर हिंडे पनि कुरै काट्छन पोइ ले बेल्जियम बाट कमायार पठाइदियको छ र खुब लगाउने भयकी छे आदी आदी । हा - मलाइत यही घरे लु कै मन पर्छ । चप्पल पनि छिनेका थिय खाली खुट्टामै छु । बैंस त कुनै साह्रै नपाई ग इसक्यो के को चप्पल ? चाड पर्व आउँदा पनि खुशी लाग्दैन । पोहोर साल तिज्मा लिन बा आयका थिय जान दीनन सासुले । ४ वटा त भैंसी छन सबै मेरै थाप्लोमा हो । कहिले कांही त घांस काट्दा काट्दै टोलाएर आफु कहाँं छु थाहै नहुने -सानो भारी देखे सासुको मुखै बांङो देखिन्छ । मेरो सिरिमान ले कमायर न पठाय यो घर को छाकै टर्दैन । तैपनी म कती हेलां भयकी । सासु पनि मैना मैनामा मेरो कोठामा छिर्छिन -पोइले कन्ना पछाडि केही पठायको पो छकी यसलाई ? राती पनि चिओ गर्छिन कतै गाई कि भनेर । पानी लिन जांदा पनि कौसी बाट हेर्छिन रे ।रोपाइ का खेताला तिर पनि हियर संका काट्छिन । आखिर के को बन्धन हो मलाई यस्तो ? म उन्को छोराको सपना सजाउन आयकी । आखिर म गोठाली मात्रै भयं । पल्तिर जयन्द्रे संग के कुरामा हो कुन्नी म यक दिन हांसेकी थियं सासु ले कुरो लाइछन लोग्ने एस् मैना बोलेन न् । मलाई पनि कुरा लगाउनेको तांतिनै छन्नी । मत पत्याउन्न । खैरिनी ल्यायर बसिच्चन रे --तिम्रांकाले भन्छन - खै के हो के हो । दुरान को भोली पल्टै हिंडेका हुन ।मत राम्रो संग अनुहार पनि हेर्न कहाँं पायकी थियं र? तर मन त द यालु होला जस्तो लाग्छ । ढिलो भयपनी उनी यक दिन आउछन । --- ------------------------------------------------